Shirka shaqaalaha dhexe Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ayaa ka qabsoomay qolka shirarka ee wasaarada. – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ September 25, 2017
25/09/2017- Shirka oo ah mid bishii mar dhaca laguna kala qaato talooyin badan iyo wacyigelin shaqaalaha dhexdiisa ah, waxaana sida caadiga ah shirka gudoominayay agaasimaha guud ee Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dawlada Puntland Maxamed C/qaadir Cismaan iyo agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha, C/llaahi Xirsi Ciise.
Is wareysi iyo kala warqaadasho kadib agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha ayaa ku booriyey shaqaalaha in ay ilaashaan xeerarka shaqaalaha wasaarada sida fasaxyada, wakhtiyada shaqa gelida iyo ka bixida kala xadaynta shaqada shaqaalaha IWM.
Agaasimaha guud ee wasaarada ayaa warbixin ka siiyey shaqaalaha safar uu ku maray wadamada deriska sida Kenya iyo Ethiopia, wuxuuna shaqaalaha la wadaagay dhamaan wixii uga qabsoomay kulamadii uu layeeshay madaxda waxbarasahda wadamadaas iyo sidoo kale kulamo uu la yeeshay ardayda reer Puntland ee wax ka barata dalka Ethiopia.
Agaasimaha guud wuxuu bogaadiyey shaqaalaha wasaarada inay yihiin dad mar walba u heelan u shaqaynta danta shacabkooda mararka qaarna shaqeeya wakhtiyo ka badan intii shaqada loogu tala galay, iyadoo aan fiirinayn dan gaar ah, wuxuu sidoo kale ku amaanay shaqaalaha iyo wasaaraduba in ay yihiin kuwa ugu shaqada balaaran uguna shaqada badan dhamaan shaqaaalaha dawlada Puntland midaas shacabka reer Puntland marag cad ka yihiin.
By: Deeq Hurevov Madaxa isku xirka Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare.